လီဗာပူးမှာ ကလော့ပျ သဘောတှလှေ့တဲ့ အသငျးသားကို ရှေးထုတျပွတဲ့ ကာရဂေါ - Myan News
လီဗာပူးဂန်တဝငျကစားသမားကွီး ကာရဂေါက အသငျးဟောငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး သုံးသပျပွောဆိုရာမှာ ယာဂငျကလော့ပျလကျအောကျ အရေးပါဆုံး ကစားသမားအဖွဈ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဟနျဒါဆနျကို ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ ကှငျးလယျလူဟာ ၂၀၁၁ ခုနှဈကတညျးက လီဗာပူးကို ပွောငျးလာခဲ့သူဖွဈပွီး လကျရှိ အသငျးမှာ ဝါအရငျ့ဆုံး စီနီယာဖွဈတယျ။ သူဟာ အဝတျလဲခနျးကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျနိုငျပွီး မာကြောတဲ့ စိတျဓါတျရှိသူအဖွဈလညျး လီဗာပူးအသငျးသားတှထေဲ ထငျရှားပါတယျ။
ဆာလကျ၊ မာနေး၊ ဗနျဒိုကျလို ကမ်ဘာအဆငျ့ ကစားသမားတှနေဲ့ ဘရာဇီး ကစားသမားတှဟော ဟနျဒိုရဲ့ ဦးဆောငျမှုကို လေးစားမှု ရှိကွကာ သူဟာ လကျရှေးစငျအသငျးမှာလညျး လီဗာပူးအသငျးသားတှကေို ဦးဆောငျပေးသူတဈဦးအဖွဈ နရောရနသေူဖွဈပါတယျ။
ကာရဂေါက ဆိုရာမှာ ” ဟနျဒိုက အရေးပါလှနျးခဲ့တယျ။ ယာဂငျကလော့ပျ လကျထကျမှာ သူက အမွဲတမျး မေးခှနျးထုတျခံခဲ့ရတာက ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့ကို ရသငျ့လို့လား? လီဗာပူးအသငျးခေါငျးဆောငျ ဖွဈသငျ့ရဲ့လား? ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားလုံးသော ထိပျတနျးမနျနဂြောတှကေ ဟနျဒိုကို လူစာရငျးမှာ ရှေးခယျြခဲ့ကွတာပါပဲ။
ကနြျော သူနဲ့အတူ တှဲဘကျ ကစားဖူးပါတယျ။ ဒီတော့ ဂြျောဒနျရဲ့ အရညျအခငျြးနဲ့ အဝတျလဲခနျးထဲက သူ့ရဲ့ အနအေထားအကွောငျးကို ကနြျော ကောငျးကောငျးကွီး သိပါတယျ။ မနျနဂြောတဈဦးအတှကျ အဝတျလဲခနျးထဲမှာ သူ့ကို ပိုငျဆိုငျထားတာက ရှထေကျ အဖိုးတနျပွီး နရေ့ကျတိုငျးမှာ ဥပမာအဖွဈ အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
ယာဂငျကလော့ပျ လကျထကျ လီဗာပူးက သူ့နရောအတှကျ ကစားသမား အမြားအပွားကို ချေါယူခဲ့ပမေယျ့ သူကတော့ ဆကျလကျ ကစားနဆေဲပါပဲ။ ဒါကပဲ သူ့ရဲ့ အရညျအခငျြးကို ပွောပွပွီး ဖွဈနပေါတယျ ” လို့ ဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့ ဟနျဒိုဟာ အင်ျဂလနျအသငျးမှာလညျး ခေါငျးဆောငျတဈဦးအဖွဈ ဦးဆောငျနသေူပါ။ ကိနျး ဒဏျရာရနတောကွောငျ့ မတျလအတှငျး ယှဉျပွိုငျရမယျ့ ဒိနျးမတျနဲ့ အီတလီတို့နဲ့ ခဈြကွညျရေးပှဲတှမှော အင်ျဂလနျအသငျးခေါငျးဆောငျ ရာထူးကို ဟနျဒို တာဝနျယူပေးရဖှယျ ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး ကာရေဂါက အသင်းဟောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သုံးသပ်ပြောဆိုရာမှာ ယာဂင်ကလော့ပ်လက်အောက် အရေးပါဆုံး ကစားသမားအဖြစ် အသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆန်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက လီဗာပူးကို ပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အသင်းမှာ ဝါအရင့်ဆုံး စီနီယာဖြစ်တယ်။ သူဟာ အဝတ်လဲခန်းကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်နိုင်ပြီး မာကျောတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိသူအဖြစ်လည်း လီဗာပူးအသင်းသားတွေထဲ ထင်ရှားပါတယ်။
ဆာလက်၊ မာနေး၊ ဗန်ဒိုက်လို ကမ္ဘာအဆင့် ကစားသမားတွေနဲ့ ဘရာဇီး ကစားသမားတွေဟာ ဟန်ဒိုရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို လေးစားမှု ရှိကြကာ သူဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်း လီဗာပူးအသင်းသားတွေကို ဦးဆောင်ပေးသူတစ်ဦးအဖြစ် နေရာရနေသူဖြစ်ပါတယ်။
ကာရေဂါက ဆိုရာမှာ ” ဟန်ဒိုက အရေးပါလွန်းခဲ့တယ်။ ယာဂင်ကလော့ပ် လက်ထက်မှာ သူက အမြဲတမ်း မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရတာက ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်ကို ရသင့်လို့လား? လီဗာပူးအသင်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်သင့်ရဲ့လား? ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးသော ထိပ်တန်းမန်နေဂျာတွေက ဟန်ဒိုကို လူစာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။
ကျနော် သူနဲ့အတူ တွဲဘက် ကစားဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ ဂျော်ဒန်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အဝတ်လဲခန်းထဲက သူ့ရဲ့ အနေအထားအကြောင်းကို ကျနော် ကောင်းကောင်းကြီး သိပါတယ်။ မန်နေဂျာတစ်ဦးအတွက် အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ သူ့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာက ရွှေထက် အဖိုးတန်ပြီး နေ့ရက်တိုင်းမှာ ဥပမာအဖြစ် အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာဂင်ကလော့ပ် လက်ထက် လီဗာပူးက သူ့နေရာအတွက် ကစားသမား အများအပြားကို ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် သူကတော့ ဆက်လက် ကစားနေဆဲပါပဲ။ ဒါကပဲ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကို ပြောပြပြီး ဖြစ်နေပါတယ် ” လို့ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးအသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဟန်ဒိုဟာ အင်္ဂလန်အသင်းမှာလည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ဦးဆောင်နေသူပါ။ ကိန်း ဒဏ်ရာရနေတာကြောင့် မတ်လအတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဒိန်းမတ်နဲ့ အီတလီတို့နဲ့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲတွေမှာ အင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင် ရာထူးကို ဟန်ဒို တာဝန်ယူပေးရဖွယ် ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။